အမကေ ခဈြသူထားစခေငျြပမေဲ့ ကောငျမလေးမရှိတဲ့အတှကျ Photoshop နဲ့ ရညျစားရှိကွောငျး အမကေို့လှညျ့စားလိုကျတဲ့ ကောငျလေး - NEW - KBC HIM MY
သားသမီးတှကေို အခဈြနဲ့ ပတျသကျဖို့ တားမွဈလရှေိ့တဲ့ မိဘတှအေပွငျ သားသမီးတှကေို တဈစုံတဈယောကျနဲ့ အမွဲသိစခေငျြတဲ့ မိဘတှလေညျး ရှိပါတယျ ။ မိဘမြား မကွာခဏ ဂရုစိုကျလရှေိ့တဲ့ သားသမီးမြားရဲ့ ပွဿနာမြားထဲမှ တဈခုမှာ အခဈြဖွဈပါတယျ ။ မိဘတှကေ သားသမီးကို ငယျငယျကဆိုရငျ စာကကျြဖို့ပဲ အာရုံစိုကျစခေငျြတယျ ၊ သားသမီးတှကေို စောစောမခဈြစခေငျြကွပမေယျ့ အသကျကွီးလာလတေဲ့ခြိနျဆိုရငျတော့ ခဈြသူရှိဖို့ တိုကျတှနျးလာလလေပေါပဲ ။
သငျဟာ ယောကျြားလေးဖွဈစေ မိနျးကလေးဖွဈစေ ကွီးပွငျးလာတာနဲ့အမြှ “နငျ့မှာ ခဈြရတဲ့သူရှိပွီလား” ဆိုတဲ့ မေးခှနျးမြားနဲ့ ရငျဆိုငျရမှာဖွဈပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ “ဘယျတော့ လကျထပျမှာလဲ? ” ဆိုပွီး မေးလာတဲ့အခါ တဈကိုယျရဖွေဈနသေေးတဲ့ လူငယျတှကေို စိတျရှုပျစပွေီး ဖွရှေငျးဖို့ နညျးလမျးတှကေို ရှာဖှစေပေါတယျ ။ မကွာသေးမီက ဒီဇိုငျနာအသိုငျးအဝိုငျးအတှကျ ဖိုရမျတဈခုမှာ Kuroba Kaito ဆိုတဲ့ အကောငျ့တဈခုက သူ့မိခငျဟာ သူ့ကိုခဈြသူထားစလေိုတဲ့ဆန်ဒကို ကိုငျတှယျဖွရှေငျးရနျ Photoshop နဲ့ အသုံးပွုပုံကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ ။
ကောငျလေးက သူ့မိခငျကို ပွသရနျ သူ့ရဲ့ပုံကို မိနျးကလေးလိုပွငျပွီး သူရဲ့ခဈြသူကောငျမလေးဆိုပွီး အမကေို့ လှညျ့စားခဲ့ပါတယျ ။ အခြိနျတိုအတှငျး အဆိုပါပို့ဈတငျပွီးနောကျ၊ အပွနျအလှနျတုံ့ပွနျမှု ထောငျပေါငျးမြားစှာဖွငျ့ အှနျလိုငျးအသိုငျးအဝိုငျးရဲ့ အာရုံစိုကျမှုကို လငျြမွနျစှာ ရရှိခဲ့ပါတယျ ။ လူအမြားစုက သူ့အရညျအခငျြးကို အသိအမှတျပွုကွပွီး အခြို့က အဆိုပါနညျးလေးကို clip နဲ့ ဝမြှေပေးဖို့ကိုလညျး တောငျးဆိုခဲ့ကွပါသေးတယျ ။
သားသမီးတွေကို အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ဖို့ တားမြစ်လေ့ရှိတဲ့ မိဘတွေအပြင် သားသမီးတွေကို တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ အမြဲသိစေချင်တဲ့ မိဘတွေလည်း ရှိပါတယ် ။ မိဘများ မကြာခဏ ဂရုစိုက်လေ့ရှိတဲ့ သားသမီးများရဲ့ ပြဿနာများထဲမှ တစ်ခုမှာ အချစ်ဖြစ်ပါတယ် ။ မိဘတွေက သားသမီးကို ငယ်ငယ်ကဆိုရင် စာကျက်ဖို့ပဲ အာရုံစိုက်စေချင်တယ် ၊ သားသမီးတွေကို စောစောမချစ်စေချင်ကြပေမယ့် အသက်ကြီးလာလေတဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့ ချစ်သူရှိဖို့ တိုက်တွန်းလာလေလေပါပဲ ။
သင်ဟာ ယောက်ျားလေးဖြစ်စေ မိန်းကလေးဖြစ်စေ ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ “နင့်မှာ ချစ်ရတဲ့သူရှိပြီလား” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းများနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် “ဘယ်တော့ လက်ထပ်မှာလဲ? ” ဆိုပြီး မေးလာတဲ့အခါ တစ်ကိုယ်ရေဖြစ်နေသေးတဲ့ လူငယ်တွေကို စိတ်ရှုပ်စေပြီး ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေစေပါတယ် ။ မကြာသေးမီက ဒီဇိုင်နာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ဖိုရမ်တစ်ခုမှာ Kuroba Kaito ဆိုတဲ့ အကောင့်တစ်ခုက သူ့မိခင်ဟာ သူ့ကိုချစ်သူထားစေလိုတဲ့ဆန္ဒကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် Photoshop နဲ့ အသုံးပြုပုံကို မျှဝေခဲ့ပါတယ် ။
ကောင်လေးက သူ့မိခင်ကို ပြသရန် သူ့ရဲ့ပုံကို မိန်းကလေးလိုပြင်ပြီး သူရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးဆိုပြီး အမေ့ကို လှည့်စားခဲ့ပါတယ် ။ အချိန်တိုအတွင်း အဆိုပါပို့စ်တင်ပြီးနောက်၊ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု ထောင်ပေါင်းများစွာဖြင့် အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို လျင်မြန်စွာ ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ လူအများစုက သူ့အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုကြပြီး အချို့က အဆိုပါနည်းလေးကို clip နဲ့ ဝေမျှပေးဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသေးတယ် ။